Soo dejisan ESET NOD32 Antivirus 13.0.24 – Vessoft
WindowsAmnigaAntivirusesESET NOD32 Antivirus
Bogga rasmiga ah: ESET NOD32 Antivirus
ESET NOD32 Antivirus – xal la isku haleyn karo oo loogu talagalay difaacida kombuyuutarka badan iyo ka saarista fayraska. Software wuxuu ka ilaaliyaa kombuyuutarka dhammaan noocyada hanjabaadaha kala duwan sida fayrasyada, rootkits iyo casuumada, waxayna ka hortagaan kuwa soo jiidashada ama bogagga been-abuurka ah inay isku dayaan inay helaan xog qarsoodi ah. ESET NOD32 Antivirus waxay leedahay habka scan ee ku salaysan tiknoolajiyadaha dariiqa si ay u dardar-geliyaan habka baaritaanka iyaga oo ka reebaya faylasha nabdoonaanta iyaga oo la barbar dhigi karo xogta sumcada codka. Software wuxuu ilaaliyaa nidaamka ammaanka ee ka dhanka ah weerarada heer qotodheer wuxuuna ogaadaa weerarada ku saleysan qoraallada casriga ah kuwaas oo isticmaalaya qolka xadhigga amaba dookheyaal si ay u galaan. ESET NOD32 Antivirus waxay taageertaa hab gaar ah oo la shaqeeya iyada oo lala shaqeynayo xannibaadaha si loo ogaado falalka laga shakiyo iyo hababka xun ee nidaamka. Sidoo kale, ESET NOD32 Antivirus ayaa ka hortagaya fayrasyo ​​khatar ah oo loogu talagalay inay joojiso suurtagalnimada in lagu ogaado antivirus ama nidaam difaac kale.
Iska ilaalinta, antivirus, antibiyootiko
Badbaadinta nidaamka faylka
Ogaanshaha hanjabaadaha aan suurtogalka aheyn
Raadinta qalabka dibadda
Soo dejisan ESET NOD32 Antivirus
ESET AV Remover – waa adeeg waxtar u leh xallinta dhibaatooyinka dhici kara inta aad rakibidda barnaamijyada antivirus-ka iyo alaabada amniga ee nidaamka.
Faallo ku saabsan ESET NOD32 Antivirus
ESET NOD32 Antivirus Xirfadaha la xiriira
BullGuard Antivirus – kombuyuutar-adda ayaa ka ilaaliya kombuyuutarkaaga waqtiga-dhabta ah ka-hortagga weerarada noocyada kala duwan ee furinnada, ka-faa’iideysiga iyo hanjabaadaha internetka.
Qalab weyn in lagula dagaalamo ka dhanka ah fayrasyada ee noocyada kala duwan. Software wuxuu isticmaalaa farsamooyinka kala duwan si loo ogaado hanjabaad iyo awood u si fudud iyaga tirtirto.
AVIcodec – softiweer si aad u eegto xogta ku saabsan codeodeyaasha iyo miirayaasha noocyada kala duwan leh. Softiweerku wuxuu falanqeeyaa nidaamkaaga jiritaanka koodh-galeyaasha waqtigiisu dhammaaday wuxuuna bixiyaa soo-dejinta nooca ugu dambeeya ee cusboonaysiintooda.
Software si ay u maareeyaan computer ka fog. Software waxay bixisaa xuquuqda helitaanka kombiyuutaro kale u adeega tayada.